Uganda oo heshay macluumad dheeraad ah oo muujinaya in weeraro Argagixiso laga fulinayo Kampala – Radio Daljir
Oktoobar 18, 2013 5:14 b 0
Kampala, October 18, 2013 – Hay?adaha amaanka ee dalka Uganda ayaa heegan sare la geliyey maanta oo jimce ah xili ay saraakiisha sar sare ee booliska dalkaas ay sheegeen in ay heleen macluumaad muujinaya in Kampala laga abaabulayo weeraro Argagixiso oo xoog badan.
Saraakiisha ayaa sii xoojiyey war ka soo baxay safaarada Maraykanka ee Uganda bartamihii toddobaadka, kaas oo sheegayey in ururka Al-shabaab ay damacsan yihiin in ay weeraro Argagixiso oo waa wayn ka fuliyaan magaalada Kampala, saraakiisha booliska ayaa maanta jimce ah iyana sidaas sheegay.
USA waxay xustay in weerarada la filayo in ay Kampala ka dhacaan ay la mid yihiin kii Westgate mall ee Nairobi ka dhacay bishii hore oo kale.
?Ilo wareedyo aan ku kalsoonahay ayaa noo soo weriyey macluumaad rasmiga u dhow, degniinaha degdega ah ee soo baxaya ayaa iyana sii kordhaya.? Ayuu yiri taliye xigeenka booliska dalka Uganda Patrick Onyango.
Taliye xigeenka Onyango ayaa sidan hadalkiisa ku sii daray ?Saraakiisha booliska ee maqan dhamaantood waa loo yeeray, waxaana laga dalbaday in ay joojiyaan howlaha ay hayaan gebi ahaan, hadda caasimada ayaa laga filayaa, si ay qorshaha ka hortaga u dejiyaan.?
Booliska Uganda ayaa degniin adag oo noocan oo kale ah soo saaray markii ugu horaysay, xili ay maalmihii tegay soo baxayeen warar sheegaya in khatar amni ay jirto, 2010-kii ayaa Al-shabaa qaraxyo waa wayn ka fuliyeen Kampala xiligaas waxaa dhintay 79 ruux.
Khasaaraha ka dhashay beeralay ku diriray shabeelaha dhexe oo sii kordhaya